Ka Sii Gudubka Dadweynaha: Noocyada Qaybaha Dhagaystayaasha Horukacsan ee Wadda Ka-qaybgalka La Qiyaasi Karo | Martech Zone
Ka baxsan Shakhsiyaadka Dadweynaha: Noocyada Qaybaha Dhagaystayaasha Horukacsan ee Wadda Ka Qaybgal La Cabbiri Karo
Isniin, Disembar 14, 2020 Isniin, Disembar 14, 2020 George Rowlands
Waad ku mahadsan tahay guruun kasta oo aad aaminsan tahay ee Suuqgeynta Aaladda, iyo dabacsanaanta ay siiso suuqleyda. Badanaa, waxaan u isticmaalnaa otomaatiga suuqgeynta ka qeyb qaadashada iyo kobcinta hagida. Tan waxaa lagu gaari karaa ololeyaal faleebo ah, iyo ogeysiis dabeecad kiciya si ay talaabo u qaadaan. Mail merge waa muuqaal kale oo samada lagu soo diray. Fursadda in lagu daro qof kasta, oo keliya hal magac qaata mowduuca iyo sadarka ugu horreeya ee iimaylkaaga ayaa ah hubaal-guul darraysasho-daaweeyn cher
Runtu runta maahan oo keliya is-gaarsiinta suuqgeynta awooddo waxbadan sii wad; sidoo kale waa taas baahida si aad wax badan uga sii fogaato. Waxaad ugu yeertay magacooda koowaad, laakiin inta kale ee emaylkaaga waa humdrum, halkaas-ayaa lagu sameeyay-taas, mana ahan wax shaqsi ah gabi ahaanba. Waxyaalaha dhabta ah ee gaarka ahi waxay u baahan yihiin wax badan. Gaar ahaan, waxay u baahan tahay kala qaybin cad, oo ka baxsan tirakoobka dadweynaha, si loo ogaado macaamiisha, loo fahmo waxa ay doonayaan, isla markaana si toos ah loola hadlo baahidooda.
Qaybta Suuqgeyntu Waxay Ka Gudubtaa Dadweynaha
Qeybinta Dhageystayaasha wax cusub maaha. Hoog, ma ahan wax cusub oo hadda waa kan ugu yar ee qaawan; waxaa laga filayaa kooxaha suuq geynta waxsoosaar kasta. Waxay ku lug leedahay kala-saaridda iyo isku-dubbaridka dhagaystayaasha suuq-geynta ganacsiga kooxo-hoosaadyo, iyadoo lagu saleynayo astaamo kala duwan oo ay leeyihiin iyo astaamaha ay wadaagaan. Waad ogtahay waxa ay tahay, qof walbaa wuu ku sugan yahay. Way shaqeysaa oo tirakoobka ayaa iska hadlaya.
76% macaamiisha ayaa filaya in meheraddu ka warqabto dookhooda.
Demographics waa asalka, qaabka ugu caansan ee dhagaystayaasha. Maxay u noqon waayeen? Waxay kala soocaan dad kala duwan iyadoo loo cuskanayo astaamahooda asaasiga ah sida da'da, goobta, iyo jinsiga, in la xuso wax yar. Laakiin maanta, tani maahan dhammaan-iyo dhammaad-dhammaan kala-soocid. Kuma filna in wax guud laga dhigo oo lakala sooco iyadoo loo cuskanayo wax aan muhiim u ahayn halka ay ka yimaadeen ama da'da ay yihiin. Tani kama dhalayso shaqsiyeyn, waa mala-awaal aqoon leh. Macaamiishaadu way u qalmaan si ka wanaagsan.
Meheraddaadu si ka wanaagsan ayey u qalantaa. Shakhsiyeynta saxda ah ee wacyigelinta iyo waxyaabaha suuqgeynta ayaa muhiim u ah guusha mustaqbalka.
Nooca 1: Qeybinta Ku saleysan cilmu-nafsiga
Halka ay tilmaamaha xogta dadweynuhu noo sheegaan kuwaas oo ayaa wax iibsanaysa, dhibcaha xogta nafsiga ah ayaa noo sheegaya sababta dadkaas ayaa iibsanaya. Xogta cilmu-nafsiga waxaa u adeegsan kara ganacsi kasta si ay ugu qaataan dhiirigelin u horseedda dabeecadaha iibsashada dhagaystayaasha. Shirkadaha sameeya cilmi baarista noocan ah waxay badiyaa fiiriyaan macaamiisha qiyamka, qaab nololeedka, heerka fasalka, fikradaha, aaminsanaanta, iyo hawl maalmeedka.
Caruur ma leh
Dakhli ~ $ 25,000
Ku nool magaalada
Wuxuu Daneeyaa Muuqaalka
Keen Baaskiil & Ciyaaryahan
Waqti fara badan
Xirfad Yare; Shaqo-wadista
Ku raaxayso Ciidaha
Cilmi-nafsiyeedku wuxuu u oggolaanayaa suuqleyda inay ka soo baxaan shakhsiyaadka gaadhitaankooda dhowr qaybood. Faa'iido leh, xog nadiif ah oo si siman loo kala qeybiyay ayaa awood u siineysa inay ku hadlaan luuqadooda macmiil heer qiiro leh, inay si buuxda u fahmaan sida wax soo saar u shaqeynayo iyo sida ay u adeegsanayaan, iyo inay diirada saaraan astaamaha iyaga aadka u jecel. Waxay siisaa iyaga fikrad fiican meesha sheygu ku habboon yahay noloshooda, iyaga oo awood u siinaya inay ku xoojiyaan farriintooda tan.
Sidee? Qeybinta cilmu-nafsiga waxay u baahan tahay falanqeyn ku saabsan dabeecadaha kala duwan ee dhagaystayaasha ka hor inta aan loo kala bixin. Waxay adeegsaneysaa cilmi baaris tayo leh oo lagu sameeyay kheyraadka iskaa wax u qabso ah sida sahanno, wareysiyo, iyo su'aalo si loo kashifo qodobbo kale oo gaar ah oo ku saabsan kaqeybgale kasta. Su'aalaha waxay dabooli karaan qaddar kasta oo mawduucyo ku tiirsan warshadaha. Tusaale ahaan, shirkadaha B2B waxay u muuqdaan inay diiradda saaraan shaqooyinka la qabanayo iyo su'aalaha horumarinta macaamiisha. Khadadka su'aashani waxay gacan ka geystaan ​​sharraxaadda sida ugu habboon ee wax soo saar loogu sameeyo shaqada maalinlaha ah ee Macluumaadka Macaamiisha Fiican (ICP), iyo sida badeecaddoodu u dardargelin karto natiijooyinka.
Xusuusnow. Waxaa jira xariiq wanaagsan oo udhaxeysa shaqsi ahaanta saxda ah iyo jebinta asturnaanta gaarka ah. Sida iska cad, waa inaad waligaa uun ku ururiso xogta isticmaale ogolaanshahooda, laakiin sidoo kale waa inaad hubisaa waxa aad ka weydiineyso iyaga inaysan ahayn mid shaqsiyadeed oo duulaan ah. Sababtaas awgeed, way adkaan kartaa helitaanka xogta nafsaaniga ah. Fikradda wanaagsan waa in la siiyaa dulsaar-gaar ah, faa'iido leh, maadada freemium iyadoo lagu soo celinayo iskaashigooda, ama gaar u-helitaanka hore ee badeecada ama howlaha dhowaan la soo saaray.
Nooc 2: Qaybaha ku saleysan Qiimaha Macaamiil
Qeybinta ku saleysan danta ayaa si gaar ah u eegaysa nooca waxyaabaha ay rajaynayaan, hogaaminayaan, iyo macaamiisha hadda jira ay cunayaan. Waa qeyb ahaan si gaar ah loogu talagalay in lagu riixo isticmaaleyaashaas inay hoos u sii dhigaan masaska, iyadoon la siinin wax aan ahayn qiime iyo khibrad markay raadinayaan wax soo saarkooda. Tusaale ahaan, haddii mid ka mid ah rajadayadu ay saxeexday liistadayada dirista maxaa yeelay waxay soo dejiyeen e-mayl qabow-e-maylkeenna, markaa waxaan ku dhejin karnaa koox dad ah oo xiiseynaya emaylka qabow.
Sababtoo ah rajadu inay aqrinayso waxyaabahaaga macnaheedu maahan inay iibsanayaan alaabtaada.
Bayaanka kor ku xusan waa mid aad run u ah. Laakiin geeddi-socodka oo dhan ee qiimaha ku-saleysan iibku wuxuu ku saleysan yahay fahamka iyo xoojinta sababaha ay alaabtaydu faa'iido ugu leedahay rajada. Haddii aan fiiro gaar ah u leeyahay inay soo dejinayaan tilmaamahayga email-ka qabow, markaa waxay u badan tahay inay xiisayn doonaan waxyaabo badan oo emayl qabow ah sida qoraalladayda mawduucayga; kan 'sida loo helo cinwaan emayl kasta' socodsiintiisa.
Ugu dambeyntiina, suuqleyda ayaa kor u qaadi kara wacyigalintaan waxayna riixayaan rajada inay hoos u sii dhigaan masaafada iyagoo u soo bandhigaya wax soo saarkooda horukaca iibka. Abaalgudkoodu waa wax soo saar la arki karo, oo la maareyn karo oo laga helay talooyinkooda. Horay ayey usocdaan, waxay awoodaan inay soo diraan emayllo tiro badan oo miisaan ah, kahor intaan la falanqeynin waxqabadkooda isla markaana lagu hagaajinayo waxqabadkooda heerarka jawaabta ee wanaagsan.
Nooc 3: Qaybaha ku saleysan Qiimaha Ganacsi
Qeybinta qiimaha ku saleysan waa istiraatiijiyad kala-soocid ah oo dejisa rajooyinka, hoggaamiyeyaasha, iyo macaamiisha koox koox iyadoo lagu saleynayo qiimaha ay ku siin karaan ganacsi. Caadi ahaan ka fiirsan maayo tani inay si gaar ah farsamaynta u kala qaybinta wadista shaqsiyadeed. Laakiin, ka dib wixii faafa u ku sameeyay adduunka ganacsiga, waxay ku dhowdahay inay ahaato farqiga u dhexeeya qayb wax ku ool ah oo aan waxtar lahayn oo horay u socda.
Awoodda wax iibsiga ayaa noqotay uun so lama saadaalin karo. Qaabka masiibada iyo xirxirayaasheeda xigta saameysey ganacsiyada kala duwan warshadaha kala duwan gebi ahaanba waa wax aan caadi ahayn. Tusaale ahaan, dukaamada eCommerce badankood way kobceen, laakiin shirkadaha safarka ayaa jilbaha loo dhigay. Iibinta ganacsiyada waxay u baahan tahay inay tan aqoonsadaan oo ay dusha sare ka saaraan, kala qaybinta macaamiishooda iyadoo lagu saleynayo sida ay u saameeyeen. Kadibna, waxay ku deeqi karaan waxyaabo shakhsi ahaaneed, naxariis leh iyo dalabyo ay ku caawinayaan macaamiishooda.
Sidee? Ganacsiyadu waxay u baahan yihiin inay shaqaaleeyaan khibrad wada hadal macaamiisha ah. Ha fadhiisan oo ha sugin codsi joojinta; la xiriir macaamiishaada wixii su'aalo macaamil ganacsi ah ama garoonno iib ah oo iyaga khuseeya. Muuji walaac, naxariis, wehelnimo, iyo rabitaan daacad ah inaad ku caawiso waqtigooda baahida. Hal talaabo horey usoco, dibna uma dhici doontid gadaal.
Ku dheji shirkadaha qaanso ku saleysan sida ay wax u gaareen. Haddii ay dhibaato soo gaadheen, waxay u nugul yihiin inay ka faa'iidaystaan ​​dalabyada dhimista. Haddii ay kobcayaan, waxaa laga yaabaa inay diyaar u yihiin kor u qaadista alaabooyinka la midka ah.
Nooc 4: Qaybaha ku saleysan kaqeybgalka
Casharka ugu dambeeya ee noo Qaybaha Sare fasalku waa inuu yeesho qayb dhagaystayaal ah oo ku saleysan sida ay ula fal gasho astaan. Waa qayb ka mid ah qaybaha nafsaaniga ah, waxayna tixgelineysaa sida rajooyinka, hoggaamiyeyaasha, iyo macaamiisha hadda jira ay ula macaamilaan astaan ​​guud ahaan qaybaha kala duwan. Waa warbaahinta bulshada, waa qiimayaal furan, waa guji-marin, iyo waa aaladaha gaarka ah ee ay u isticmaalaan inay ku cunaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Saddex arrimood oo waaweyn ayaa wada hawlgelinta:
Ku Xirnaanshaha, Joogtaynta, U Yeedhada-Ficilka.
Haddii aad horey u ogeyd in rajadaadu aysan fureyn e-mayladaada, looma baahna waqti lumis adigoo u diraya toddobo emayl oo dabagal ah. Si ku-meel-gaadh ah, waxaad u ogaan kartaa in rajadu si joogto ah u fureyso emaylladaada laakiin aysan ka jawaabin. Waxay mudan tahay in la galiyo koox hawl-gelin sare leh oo u furan dabagal ama laga yaabo inay u baahdaan xariiq wacyigelin ka duwan.
Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed waa tijaabada A / B ee khadadka mawduuca si loo helo midka saxda ah ee furaya furitaankooda. Waa dalabyo loo diyaariyey oo lagu jeesjeeso khadadkaas maadooyinka ah si loo kordhiyo hawlgelintooda iyo fursadaha beddelaad Waxay u direysaa wacyigelinta emaylka waqtiga ugu habboon ee ay furi karaan. Waxay u diraysaa xaddiga saxda ah ee waqtiyada, markaa kama badinaysid ama hoos uma dhigi doontid helahaaga.
Sidee? Qaybaha kaqeybgalka waxaa lagu sameyn karaa iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka raadraaca emaylka oo lala socdo is-dhexgal kasta. Caadi ahaan, tani waxay ku lug leedahay shaqaalaynta softiweerka geliya pixels-yada yar yar ee emaylka. Markii la furo pixels -yadan raadraaca ah, waxay u dirtaa codsi soo-dejin server-yada macaamilka raadraaca. Tan waxaa loo tiriyaa a view. Markaa taas, isticmaaleyaashu way arki karaan cidda, goorta, iyo aaladda ay ka kooban tahay waxyaabaha laga furay.
Xusuusnow. Kaliya waxaan si cad ugula jeedaa emaylka tusaalahan maxaa yeelay taasi waa sababta ay niyadaydu u been tahay. Emailku waa nooca ugu caamsan ee gaadhsiinta suuq geynta, hubaal. Markaan u gudubno sanadka cusub, waxaan aragnaa in badan oo ka mid ah aalado imanaya masraxa, sida sheekaysiga tooska ah, baraha bulshada, iyo barxadaha bulshada dhexdeeda ah. Waa inaan sidoo kale la soconaa isdhexgalkaan isla markaana aan ilaalino khibrad shaqsiyadeed oo ka mid ah marinadaas kala duwan
Qeybinta dhagaystayaasha waxay ka sii gudubtaa tirada dadka. Waxay eegaysaa dhiirrigeliyaha iibsadaha iyo xaaladaha. Waxay eegaysaa waxay rabaan si aad iyaga u siiso waxay doonayaan. Waa furaha koritaanka maanta.
Marka aan koro.
Tags: hawlahahawlgelinta dhagaystayaashaqaybta dhagaystayaashaaaminsan yihiindhiirigeliyaha iibsadahaqaybinta iibsadahaheerka fasalkaqiimaha macaamiishademographicsemail suuq geyntanololsuuq-geynta suuqaqaybinta otomaatiga suuq geyntaqaybinta suuqgeyntafikradahashakhsi ahaaneedcilmi nafsiyeedmuuqaalka maskaxdaqaybinta cilmu-nafsigaiibinqaybintaqiyamka
George waa Hogaamiyaha Istaraatiijiyadda Mawduuca ee NetHunt CRM. Qoraalku waa sheygiisa. Wuxuu toosh ku ifinayaa tiknoolajiyada iyo warshadaha B2B, isaga oo ka hadlaya mowduucyo kala duwan oo ka imanaya wax soo saar ilaa xeeladaha iibka iyo xiriirka macaamiisha. Wuxuu ku xiraa farqiga u dhexeeya xogta iyo waxyaabaha hal-abuurka leh oo leh ciil.
Calaamadaha: Korjoogteynta Sumcadda, Falanqaynta Dareenka, iyo Digniinta loogu talagalay Raadinta iyo Xusidda Warbaahinta Bulshada